Wasiirka dekedda iyo badda ee Puntland oo ka hadlay sii deynta Markabka MV Leila
Boosaaso:-Wasiirka dekedda iyo badda ee maamulka Puntland Eng. Siciid Maxamed Raage ayaa maanta markii ugu horeysay ka warbixiyay siideynta markabka MV Leila oo labo bilood ka hor ay afduub u heysteen kooxo burcad badeed Soomaali ah waxayna ka afduubeen xeebaha dalka Cumaan.
Wasiirka dekedda iyo badda ee maamulka Puntland Eng. Siciid Maxamed ayaa maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari wuxuuna sheegay in sii deynta Markabka MV Leila ay qeyb weyn ka qaateen maamulka Puntland , isimada iyo ganacsatada, iyo waxgarad kale wuxuuna sheegay in markabka maanta uu ka shiraacday Dekkada weyn ee magaalada Boosaaso uuna ku sii jeedo Berbara.
Qaar ka mid ah Isimada iyo Waxgaradka S/land ayaa soo gaaray magaalada Boosaaso si ay ugala hadlaan Maamulka iyo Isimada Puntland qaabkii loo sii deyn lahaa Markabka MV Leila oo u rarnaa ganacsato S/land.
Wasiirka dekedda iyo badda ee maamulka Puntland Eng. Siciid Maxamed Raaage ayaan sheegin in wax madax furasho ah la siiyey iyo in kale kooxihii Buracadbadeedka ahaa ee heystay Markabka MV Leila .